गंगालालले भित्र्यायो अत्याधुनिक ६४० स्लाइस सिटी स्क्यान, नेपालमै सबैभन्दा सस्तोमा सेवा – Health Post Nepal
२०७५ माघ १५ गते २०:२१
अत्याधुनिक क्याथल्याब सेवा
काठमाडौंको बाँसबारीस्थित सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले नेपालमा पहिलोपटक ६४० स्लाइसको अत्याधुनिक सिटी स्क्यान मेसिन भित्र्याएको छ । केन्द्रले स्थापनाको २३औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा उच्च क्षमताको सिटी स्क्यान प्रविधि तथा अत्याधुनिक क्याथल्याब सेवा विस्तार गरेको हो ।
अस्पतालका निर्देशक डा. ज्योतीन्द्र शर्माका अनुसार यति उच्च क्षमताको सिटी स्क्यान प्रविधि यसअघि नेपालमा उपलब्ध थिएन । केन्द्रले भर्खरै भित्र्याएको उक्त अत्याधुनिक ६४० स्लाइस सिटी स्क्यान प्रविधिको विकास तोसिवा मेडिकल सिस्टम नामक जापनिज कम्पनीले गरेको हो । यो प्रविधिबाट ० दशमलव ३५ सेकेन्डमा मुटुलगायत शरीरका सम्पूर्ण अंगको अवस्थाबारे थाहा पाउन सकिने डा. शर्मा बताउँछन् ।
लागत १८ करोड, गगनले छुट्याएका थिए बजेट
अस्पतालले उक्त सिटी स्क्यान उपकरण खरिदका लागि करिब १८ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको निर्देशक शर्मा बताउँछन् । डा. शर्माका अनुसार पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले आफ्नो कार्यकालमा अत्याधुनिक सिटी स्क्यान प्रविधि खरिदका लागि बजेट विनियोजन गरेका थिए । २०७३ मै बजेट विनियोजन भए पनि खरिदको लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दा २ वर्षपछि मात्र मेसिन भित्रिएको हो । क्याथल्याब खरिद भने अस्पतालले आफ्नो नियमित बजेटबाट गरेको डा. शर्माले जानकारी दिए ।
कस्तो हुन्छ ६४० स्लाइस सिटीको सेवा ?
अत्याधुनिक ६४० स्लाइस सिटी स्क्यान प्रविधिबाट ० दशमलव ३५ सेकेन्डमा मुटुलगायत शरीरका सम्पूर्ण अंगको अवस्थाबारे थाहा पाउन सकिन्छ । यसको प्रयोगले डाक्टरले दिने सेवाको गुणस्तर बढ्ने निर्देशक शर्मा बताउँछन् । यो प्रविधिको सहायताले इकोकार्डियोग्रामले पत्ता लगाउन नसकेका मुटुका एकदमै जटिल प्रकारका समस्या पत्ता लगाउन सकिन्छ । शरीरका बिग्रिएका विभिन्न भागको अवस्थाबारे विस्तृत जानकारीका लागि यो प्रविधि महत्वपूर्ण छ ।स बैभन्दा अत्याधुनिक यो सिटीको सेवा शुल्क पनि नेपालकै सबैभन्दा सस्तो हुने डा. शर्माले बताए ।
पेडियाट्रिक सिटीका लागि यो प्रविधि विशेष महत्वको छ । यसको प्रयोगले जन्मजात रूपमा हुने मुटुरोगबारे जानकारी पाउन सहज हुने डा. शर्मा बताउँछन् । यो प्रविधिको सहायताबाट मुटुको चाल नघटाईकनै मुटुका नलीहरूको एन्जियोग्राम गर्न सकिन्छ । यसले एक्स रेको रेडियसनको समय कम गराउँछ । कुनै सिटी गर्नका लागि १ सेकेन्डको समय लाग्थ्यो भने यसले झन्डै आधा सेकेन्डमै गर्छ । यस प्रविधिबाट दिनमा करिब २५–३० वटासम्म सिटी स्क्यान गराउन सकिने अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालमा यस्तो प्रविधि भित्रिएसँगै मुलुकभरबाट रेफरका केसहरू थपिने निर्देशक शर्माको अनुमान छ ।
त्यसैगरी अत्याधुनिक क्याथल्याब भित्रिएसँगै अस्पतालले दिँदै आएको सेवामा सहजता आउने डा. शर्माको दाबी छ । उक्त क्याथल्याबको क्लियारिटी राम्रो भएको उनी बताउँछन् । यसको प्रयोगले बिरामीले उपचार पाउने तरिकामा समेत सहजता आउने उनको दाबी छ ।
गंगालालले मनायो २३औँ वार्षिकोत्सव
काठमाडौंको बाँसबारीस्थित सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले मंगलबार स्थापनाको २३औँ वार्षिकोत्सव मनाएको छ । विं.सं. २०५२ मा ९ बेड तथा सीमित जनशक्ति र स्रोत–साधनबाट सञ्चालन सुरु भएको विशिष्टीकृत अस्पतालले हाल २ सय बेडमार्फत मुटुरोगको उपचार सेवा दिँदै आएको छ ।
वार्षिकोत्सव समारोहमा केन्द्रका निर्देशक डा. ज्योतीन्द्र शर्माले अस्पतालले स्थापनाकालदेखि नै हृदयरोगको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान उल्लेखनीय भएको बताए । नेपालमा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको हृदयरोगको पहिचान, रोकथाम तथा नियन्त्रणमा अस्पतालले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।
अस्पतालले हाल मुटुरोगको क्षेत्रमा उत्कृष्ट विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । सीमित स्रोत–साधनबाट सुरु भएको अस्पताल हाल वैज्ञानिक प्रविधि, दक्ष जनशक्ति तथा अत्याधुनिक औजारहरूले सुसज्जित राष्ट्रियस्तरको अस्पतालका रूपमा स्थापित हुन सफल भएको शर्माले बताए ।
अस्पताल स्थापनाकालदेखिका सञ्चालक समितिहरू, स्वास्थ्य मन्त्रालय, केन्द्रमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारी, नेपाल सरकारका सरोकारवाला निकायहरूको निरन्तर सहयोग र आमजनता तथा बिरामीहरूको अटुट विश्वास एवम् सद्भावका कारण नै अस्पताल आजको स्वरूपमा आउन सफल भएको शर्माको भनाइ थियो ।
विं.सं. २०५५ मा अस्पतालले बहिरंग सेवाको थालनी गरेको थियो । हालसम्म अस्पतालले करिब १७ लाख बिरामीलाई बहिरंग सेवा दिइसकेको छ । हालसम्म अस्पतालले २२ हजार बिरामीको मुटुको शल्यक्रिया गरेको अस्पतालको तथ्यांक छ ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सम्पूर्णमा धन्यवाद दिए । नसर्ने रोगको प्रकोप दिनानुदिन बढ्दै जाँदा अस्पतालको भूमिका तथा जिम्मेवारी थप महत्वपूर्ण हुँदै जाने मन्त्री यादवको भनाइ थियो ।
मुटुरोगको उपचार महँगो हुँदै गएको अवस्थामा कतिपय विपन्न बिरामीले उपचारमा पहुँच नभएकै कारण अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको मन्त्री यादवले बताए । त्यसका लागि नेपाल सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम उत्कृष्ट विकल्प भएको समेत उनले बताए ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरीले हृदयरोग केन्द्रले हालसम्म हासिल गरेको उपलब्धि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको समेत उपलब्धि भएको बताइन् । ९ बेडबाट सेवा सुरु गरेको अस्पताललाई अत्याधुनिक प्रविधिसम्पन्न बनाउनमा अस्पतालका कर्मचारीको मिहिनेत नै महत्वपूर्ण रहेको डा. चौधरीको भनाइ थियो ।
६४० स्लाइस सिटी स्क्यान